Isamsung kunye neHuawei bangcwaba i-hatchet | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Apple kunye ne-Samsung bajongane iminyaka emininzi kuba owokuqala watyhola inkampani yaseKorea ngokukopa indlela yokuvula i-iPhone kwiziphelo zayo, ukongeza kuyilo lwe-iPhone yokuqala. Ezo mpikiswano Baye bayigqiba iminyaka embalwa edlulileyo xa bobabini bevumile, isivumelwano esingakhange senzeke.
Kodwa ayisiyiyo kuphela imbambano athe uSamsung wayenayo kule minyaka idlulileyo, kuba kwinkampani yaseTshayina ikwanazo ii-pluses kunye nee-minus zayo kule minyaka mithathu idlulileyo. Ngethamsanqa zombini ezi nkampani, ngokweendaba zeNikkei, Bafikelele kwisivumelwano kwimpikiswano yelungelo elilodwa lomenzi ebejamelene nayo.
Ngokwesi sixhobo, iNkundla yaBantu abaPhakamileyo yaseGuangdong, kumazantsi e-China isibonisile isivumelwano. Imigaqo, njengesiqhelo kolu hlobo lwesivumelwano, azichazwanga esidlangalaleniEwe, kodwa eyona nto ikhuselekileyo kukuba zombini ezi nkampani zabelane ngokusetyenziswa kwamalungelo awodwa omenzi wechiza, amalungelo awodwa omenzi wechiza ekubonakala ukuba ayimfuneko ukuba okanye ukwenza nayiphi na i-smartphone.
Eyona nto inokwenzeka, zombini ezi nkampani zijolise ekuthengiseni iifowuni ezininzi ngoku njengoko intengiso ibonakala ngathi imile. Ukuza kuthi ga ngoku, ngelixa iHuawei ikwazile ukufumana i-17% yentengiso, inkampani yaseKorea ifumene ukuncitshiswa kwe-10%. Ngaphandle kokulahla, iseyinkampani ebeka ezona smartphones kwiimarike inyanga nenyanga.
Ezi nkampani zimbini zaqala ukungavisisani kwabo ngo-2016, xa uHUuawei wafaka isimangalo ngokuchasene ne-Samsung kokubini e-China nase-United States. NgoJanuwari 2018, inkundla yase-China yagweba i-Huawei, iyalela i-Samsung ukuba iyeke ukuthengisa izixhobo ezichaphazelekayo kwityala. Emva koko I-Samsung iphikisana neHuawei ngolunye uhlobo lwetyala lobunikazi. Kolu hlobo lwamatyala awodwa omenzi wechiza, eyona nto iqhelekileyo kukufikelela kwisivumelwano sentsebenziswano, njengoko iinkampani zombini zenzile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Isamsung kunye neHuawei bangcwaba umnqwazi
IAmazon iveza uMlilo 7 omtsha ngomthamo wokugcina kabini nge- € 69,99